समय सापेक्ष शिक्षा दिइरहेका छौ ः प्रिन्सिपल बुढाथोकी – Rajmarg Online
समय सापेक्ष शिक्षा दिइरहेका छौ ः प्रिन्सिपल बुढाथोकी
लालीगुराँस आवासीय माध्यमिक बिद्यालय घोराही, दाङ
१ भर्नाअभियान कस्तो चल्दै छ ?
– हामीले यस शैक्षिक बर्ष २०७६ को नयाँ भर्ना यहि वैशाख २ गते देखि संचालन गरेका थियौं । सधैं झैँ हाम्रो भर्ना अभियान एउटा महाअभियानको रुपमा अगाडी बढ्ने गर्छ । यसको मतलव सर्वसुलव दरमा हामीले गरिव तथा बिपन्न वर्गका बिद्यार्थीहरुलाई बिशेष छुटको प्याकेज लिएर आम अभिभावकहरुको घरमा पुग्ने गर्छौं ।
जसका कारण नीजी बिद्यालयमा शुल्ककाकारण विद्यार्थी पढाउन सकिदैन्न भन्ने सोचाइभएका अभिभावक तथा बिद्यार्थीहरु अत्यन्तै खुसि हुनुहुन्छ । सरकारी बिद्यालयमा तिर्ने शुल्कमा थोरै थपेर निजि बिद्यालयमा पढ्न पाउँदा त्यसैले हाम्रो भर्ना अभियान एउटा महाअभियानको रुपमा चलिरहेको छ ।
२ तपाईको विद्यालयको अरु भन्दा फरक अर्थात राम्रो पक्ष के हो ?
– अरुको बिद्यालयमा खै के कस्तो छ मैले भन्न मिल्दैन । आआफ्नो विद्यालयको बारेमा आफै बोल्ने हो । तर मेरो बिद्यालयमा बालमैत्री वातावरणमा बिद्यार्थीहरुलाई मित्रवत व्यावहार गरिन्छ । यहाँ पढाउने घोकाउने भन्दा पनि सिकाउने कुरालाई बढी प्राथिमकतामा राखिन्छ । पाठ्यक्रमले तोकेको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न खालका अतिरिक्त क्रियाकपाल गर्दै बालबालिकाहरुलाई बिषयवस्तुप्रति प्रकाश पारिन्छ अनि पढाइका अतिरिक्त विभिन्न मार्सल आर्ट, संगीत खेलकुद लगाएतका अतिरिक्त क्रियाकलाप गराइन्छ । जसकाकारण बिद्यार्थीहरु बढ्दो क्रममा छन् ।
३ पछिल्लो समयलाई सम्वोधन हुने गरि तपाई विद्यालयमा शैक्षिक क्रियाकलापलाई के कसरी प्रविधि मैत्री, आधुनिक बनाउनुभएको छ ?
– हामीले हाम्रो बिद्यालयलाई बिल्कुलै प्रबिधिमैत्री बनाएका छौं । पछिल्लो समय पढाइका लागि आएका इलाइब्रेरी मल्टि मिडिया कलास स्मार्ट बोर्ड लगाएतका बिभिन्न डिजिटल प्रबिधिलाई जोडेर शिक्षण गर्ने भएकाले हाम्रो बिद्यालय प्रबिधिमैत्री छ ।
४ अभिभावक र विद्यार्थीले किन रोज्ने तपाईको विद्यालय ?
– बिद्यालयमा हामीले प्रदानगर्ने सर्वसुलव, गुणस्तरीय तथा व्यावहारिक शिक्षाकाकारण विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको रोजाइमाहाम्रो बिद्यालय पर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय झनै नयाँनयाँ प्रविधिको प्रयोग र बालमैत्री वातावरण भएकाले हाम्रो बिद्यालयमा बिद्यार्थी आउने क्रम बढेको छ ।
५). विद्यालय र विद्यार्थीको शैक्षिक सुधारको लागिअवको योजना के छ ?
– हामीले अबप्रयोग गर्ने भनेकै नयाँ प्रबिधि हो नयाँप्रविधिको प्रयोगले नै आमबिद्यार्थीहरु पढाइमा रुची बढ्ने र पछिल्लो परिवर्तित समय र समाजसंग सामान्जस्यता राख्न सक्ने नागरिक उत्पादन गर्न प्रविधिको प्रयोगलाई अपरिहार्यता ठानेर अगाडी बढिरहेकाले अबको डिजिटल जमानामा जमाना अनुसारको शिक्षा दिनलाई हामीबाट कुनै पनि कन्जुसाई हुने छैन ।